လက်ရှိနိုင်ပွဲရလဒ်အပြောင်းအလဲတွေက ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို ကားရစ်ရှင်းပြ – FBV SPORT NEWS
လက်ရှိနိုင်ပွဲရလဒ်အပြောင်းအလဲတွေက ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို ကားရစ်ရှင်းပြ
December 25, 2020 By admin Sports News
လက်ရှိနိုင်ပွဲရလဒ်အပြောင်းအလဲတွေက ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို လက်ထောက်နည်းပြကားရစ်ရှင်းပြပြီ
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ခြေစွမ်းပိုင်းပြောင်းလဲလာခြင်းနဲ့အတူ ကစားကွက်ဗျူဟာကလည်း တရှိန်တည်းပြောင်းလဲလာတာမို့ အင်္ဂလန်မှမီဒီယာများရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုအပြင် မန်ယူဖန်တွေကြား အံအားသင့်မှုတွေအပြည့်ပါဘဲ….
ရာသီအစကနေလက်ရှိမတိုင်သုံးလေးပွဲလောက်က ရလဒ်ဆိုးရွားမှုနဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ကစားကွက်ဗျူဟာ အံမဝင်မှုတွေကြားမှာ ဗျာများနေခဲ့တဲ့အသင်းက ချက်ချင်းဆို သလို ဇယားထိပ်ပိုင်းအသင်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဖလားရယူနိင်တဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်….
လက်ရှိအပြောင်းအလဲများကို ကြိုးကိုင် စီမံနေသူဟာ ဆိုးရှားလ်ကြောင့်လား ဖာဂူဆန်ကြောင့်လားဆိုတာတွေက ပရိသတ်နဲ့ မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေ သိချင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….
ယခုအပြောင်းအလဲဟာဘယ်သူတွေကြောင့် ဒီလိုတရှိန်ထိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တာလဲဆိုတာကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်း လက်ရှိ လက်ထောက်နည်းပြ ကားရစ်က ယခုလို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်….
ကားရစ်က ” ကျနော်တို့ လက်ရှိ အနေထားအများကြီးတိုက်တက်လာတဲ့အတွက် အလွန် ဝမ်းသာရပါတယ်…..အသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေနေအားလုံးကို ဖာဂူဆန်က စီမံပေးတာမဟုတ်ပါဘူး…..အိုလေ ရဲ့ Game Plan အစိတ်ပိုင်း ၄၅ %ပါပါတယ်…..
နည်းစနစ်ပိုင်းတွေမှာ ဖာဂူဆန်ကအကြံပေးတာကို ဆိုးရှားလ်ကလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်….ဖာဂူဆန်က အကြံပေးတဲ့ထဲ က တချို့အချက်တွေကို အိုလေ ယူမသုံးလို့ ကျနော်စိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်….သူဟာ ရာသီအစပိုင်းမှာ ကစားကွက် ကို အလှည့်အပြောင်းနဲ့ ကစားသမားတွေကို နေရာစုံကစားနိုင်ဖို့ ဆွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်..
ကျန်တဲ့ Game Plan 55% ကတော့ အသင်းသားအားလုံးရဲ့ ကြိုးစားမှု နိုင်လိုစိတ်ရှိမှု နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အပေါ် အလေးထားပြီး သမိုင်းအစဉ်အလာကို ထိမ်းသိမ်းချင်ကြတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လို့ပြောချင်ပါတယ်….
4-2-3-1 ကို ကစားကွက်ကိုပြောင်းဖို့ ဖာဂူဆန်က တိုက်တွန်းပေမဲ့ အိုလေဟာ သူရဲ့ ဗျူဟာနဲ့ ကစားသမားပေါ်ယုံကြည်မှုရှိတာကြောင့် ယခုလိုနိုင်ပွဲတွေရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…..နောက်တခုက 4-2-3-1 မှာ ကစားသမားတိုင်းနေရာစုံကစားနိုင်ဖို့ အလှည့်အပြောင်းတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာကတော့ နည်းပြဟောင်းကြီး ဖာဂူဆန်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေပါဆိုတာကို Sport Tribble News မှာပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်…..
Boxing Day-လက်စတာပွဲအတွက် သရဲနီတွေကို သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်တဲ့ ဆိုလ်းရှား